NDI UWEOJII JIDERE ONYE OHI, ÒTÙ NZUZO NA EJIGBO
Home crypto thrills casino casino games apk download deutsch android
in Akuko Ala Anyi
Ogbako nile nke Ejigbo dị na Lagos State bụ ndị a tụbara n’ime izu ụka mgbe izu ụka a kwusịrị ike na-ezu ohi, onye bụkwa onye ndú nke ìgwè òtù nzuzo, Eiye nke gbara alụkwaghịm, dị ka Segun Kazeem, aka ‘No Case’.
E jidere ya, bụ nke ndị uweojii na-ahụ maka ndị uweojii na-ejikarị ejikọta na Ejigbo division n’okpuru ‘Area D’ Command, Mushin na-esote onye uweojii (DPO), CSP Olabisi Okuwobi.
Nnyocha a kpughere na tupu e jidere onye ahụ a tụrụ anya ya, e jidere otu Femi Kazeem mgbe ọ gbalịsịrị ịchụpụ nwanyị nke ihe onwunwe ya na-eji mkpanaka ejiji dị ka égbè.
JIM YONG KIM MAKA OKWU NKE ABUO NA ULO AKU UWA
Detectives kwuru na ọ bụ nkwupụta nke Femi nke mere ka ejideghị akwụkwọ ọ bụla na ụlọ akwụkwọ sekọndrị mgbe ọ na-anwa ịbịarịa ndị na-emepụta Vatican Card (PVC).
Otu isi na Ejigbo Division kwuru na mgbe obere oge Segun Kazeem nwetasịrị na akwụkwọ nyocha e mere na Lafenwa Street, ụlọ ọrụ nke DPO nwere ọtụtụ oku na-arịọ ka a hapụ ya.
Mgbe e mesịrị, a sịrị na otu onye òtù Oodua Peoples Congress (OPC) bụ onye na-agba mbọ ka ọ gbaghaa nkewa ahụ ma rịọ ka a tọhapụrụ ya na mgbapụta.
Mana nke DPO kwadoro arịrịọ a, onye nyekwara iwu ka ejidere onye òtù OPC ahụ ka ọ na-etinyekwu ọkụ n’ihe omume nke Kazeem.
A chịkọtara na ọbụna mgbe a jidere ‘Ọchịchị’, ọ na-etu ọnụ n’ihu ndị uweojii na ha na-agbagha agha na-agwụ agwụ nke pụrụ ọbụna ịla azụ, na-ekwu na ọ gaghị emeri emeri, n’oge na-adịghịkwa anya ọ ga-enweta nnwere onwe ya.
Dika otu onye isi obodo si kwuo maka ihe ndi mmadu na-achoghi na DPO ma na-abughi ndi ozo, o kwuru Segun Kazeem dika onye kwadoro ndi uweojii ruo mgbe onu ogugu nke DPO ugbu a na Ejigbo.
“Nke a bụ omempụ maara ndị uweojii na ndị uweojii na-ahụ maka iwu iwu, ma enweghi ike ijide ha n’ihi na ọ jikọtara ya nke ọma.
Cheta gị; nke a abụghị oge mbu ‘Ọ dịghị ikpe’ na-ejide.
INSTAGRAM MODEL MCNAMARA NWURU NA YATCH NA MEXICO
Oge ọ bụla e jidere ya, onye a ma ama na ndị a kwanyere ùgwù ga-apụta n’ọdụ ndị uweojii na-ekwu na ọ bụ ezigbo onye na-aga n’ihu; na a ga-ahapụ ya n’oge na-adịghị anya.
Obi anyi na-aga DPO ohuru; ọ na-eme ihe ọtụtụ ndị ikom nọ ebe a na-apụghị ime. ”
Ejigbo na-agba àmà n’oge na-adịghị anya banyere ọgba aghara nke mwakpo ohi, karịsịa na mpaghara Lafenwa na Oke-Afa.
Na ngwụsị izu, a na-agba ụlọ dị n’akụkụ ụlọ ọbịa na Oke-Afa mgbe ndị niile bi na-ehi ụra.
Ọ dịghị onye maara ihe merenụ ruo ụtụtụ Saturday.
Ewakpo yiri nke ahụ mere na ọnwa gara aga na Nọmba 1, Fatoba Street, Oke-Afa, bụ ebe a na-agbazi ụlọ n’ehihie, mgbe onye nwe ụlọ ya na-ehi ụra.
Enyo ndị dị na windo nke ụlọ ahụ dị na ala, windo wepụrụ ma kpochapu ihe ndị ahụ tupu ndị ohi anabata ma wepụ ngwá ọrụ eletriki niile, ego na igwe na-enweghị ịkpọte ndị ahụ.
Ọbụna ndị agbata obi amaghị ihe mere ruo ụtụtụ.
Onye a na – ata ahụhụ, onye kwuru okwu n’aha amaghị aha, kwuru na ndị na – apụnara mmadụ ihe nwere nkwenye nke onye na – enyo enyo chere na ọ bụ nwata nke onye nwe ụlọ bi na mba ọzọ, nọ na – awakpo ụlọ ahụ n’oge nke ọnwa atọ ka a na – n’ime otu afọ.
NDI AGHA ATO, MMADU ANO OZO NWURU NA MBUSO AGHA
Pingback: NDI ISI OCHE APC NWERE IKE IDORO SARAKI TAA
Pingback: WIKE IME KA A GBAHAPURU SONGHAI FARMS – NKE OKWA